Etu esi mekọrịta kalenda gị na Android Wear | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi emekọrịta kalenda gị na gam akporo Wear
Cristina Torres ebe a oyiyi | | smartwatch
Gam akporo Wear abụwo nnukwu mgbanwe kemgbe iwebata ya. N'agbanyeghị eziokwu na ugbu a naanị ụdị abụọ na-etinye ya na ha smartwatch Ngwa, na nkatọ sitere na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ abịakwutewo ha n'ihi eziokwu ahụ bụ na e mepụtara ihe dị iche iche dabere na ụdị ngwaọrụ ahụ, na-eme ka panorama dị mgbagwoju anya dị ka ha si kwuo, eziokwu bụ na nnabata ahụ enweghị ike ịka mma. Mana n'agbanyeghị uru niile o nwere, na etu o si atọ ya ụtọ, nke bụ eziokwu bụ na obere ihe ọmụma anyị nwere nwere ike igwu anyị egwu, ị ga-amụtakwa ime ihe site na ncha.
Dịka ọmụmaatụ, na nke a, anyị chọrọ ịgwa gị usoro ị ga - agbaso iji mekọrịta kọntaktị gị na smartwatch nke na - arụ ọrụ na ya. Sistemụ arụmọrụ nke Google, Android Wear. Ọ bụ ezie na n'oge a enwere nhọrọ ole na ole na ahịa, anyị na-echetara ndị na - agụ akwụkwọ anyị na n'oge na - adịghị anya anyị nwere ike ịnwe ọtụtụ ndị ọzọ, nke ohere nwere ike ịba ụba. N'ezie, ọ bụ ezie na anyị nwere ike weara Sony, anyị nwere ike ọ gaghị enwe obi ụtọ, n'ihe banyere Motorola eziokwu pụtara ìhè, gam akporo Wear ga-abụ protagonist. Ya mere, ma ị nweela otu n'ime ngwaọrụ ndị a n'ụlọ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị ga-azụta ngwa ngwa, dee ihe ị ga-eme iji nweta mmekọrịta gị na ọnụ ekwentị gị yana kọntaktị gị echekwara.
Gam akporo Wear na ihe omume gị
Ọ bụ ezie na ọ kwesịrị ịbụ ihe Google gaara echeworịN'oge ahụ ọ dị ka nwa afọ anyị agaghị enwe ike ịnweta nhọrọ ahụ. Ekwesiri ighota na n'ime onwa na abia, enwere ihe nchoputa ihe nyocha, o yikarịrị ka a ga-eweputa ihe ohuru nke gam akporo, yabụ ikekwe site na mgbe ahu uzo anyi nyere gi ugbu a adighi mkpa. Otú ọ dị, nke anyị na-agwa gị taa ga-ekwe omume n'ihi eziokwu ahụ bụ na gam akporo bụ obodo mepere emepe, yabụ, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ngwa nke ndị mmepe XDA mepụtara ga-enye gị ohere ịmekọrịta usoro ihe omume gị na-enweghị eme ihe ọ bụla. Mfe nri?
Ọdịmma anyị na-atụle na-aza aha dị mfe nke Yiri Agenda Ọ bụ ezie na ọ ka na-amalite mmepe, ọ na-enyela ọrụ kachasị dị na ụfọdụ mmachi. Ya mere, ị nwere ike ịhụ ihe omume 50 kachasị n'ime ngwa ahụ na smartwatch gị, yana oge kachasị dị na oge a bụ ọnwa abụọ. Nke ahụ bụ, ịnwere ike iji kalịnda gị gaa na elekere na-akpaghị aka na elekere, mana yana nuances. N'ọnọdụ ọ bụla, echere m na maka nhọrọ bara uru dị otú ahụ ị nwere ike iji mee ihe yana na mmalite ya, o zuru.
Banyere imewe nke Eyi Agenda, eziokwu bụ na nke kacha nta ịke bụ ihe pụtara ìhè na ọtụtụ ngwa a. Ọ bụ ezie na m hụrụ ya n'anya nke ukwuu, mmetụ ọzọ nwere ike ịbụ na ọ na-ebufe obere ihuenyo nke ngwaọrụ ndị a. N'aka nke ọzọ, ngwa ahụ na-arụ ọrụ naanị site na ịwụnye ya na Wear gam akporo, ma ọ bụrụ na ị ga-eme ya maka oge izizi, ma ọ bụ chọọ ịbido ọnụ gị, ị kwesịrị ịma na ọ dị na folda a na-akpọ Ọrụ. Naanị ịkụ ya otu ugboro zuru ezu maka mmemme mmemme gị niile iji mekọrịta na smartwatch gị ozugbo.
N'oge Agenda eyi bụ dakọtara na Sony SW2 na LG G Watch Dabere na onye nrụpụta ya, agbanyeghị na m ghọtara na ndị ọhụrụ sitere na Samsung kwesịkwara inye nkwado. Ọ bụ kpam kpam free na ị nwere ike ibudata ya na peeji gọọmentị site na njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Etu esi emekọrịta kalenda gị na gam akporo Wear
Etu esi agbanye CD CD Hiren na USB Hiren buot
Mpụ kachasị njọ nke mmụọ egwuregwu vidiyo na-akpali